Madda Walaabuu Press: OMN sagantaa Afaan Arabaan tamsaasuun faaydaa guddaa qaba
Xumura bara 2014 keessa obboleettiin teenya maqaan isii Nasibo jedhamti natti fakkaataa maqaa isiitiin waan isiin irraa quba hin qabne meeqa jechaa turan. “OMN keessa hijaaba/fooxaa maratanii hojjachuun hin danda’amu jedhamtee ari’amte,OMN muslima hin feetu” jechuun olola OMN irratti gaggeeysaa turan. Obboleeytiin teenya sun akka maqaa isitti fayyadamanii olola oofaa jiran dubbattee waan isaan dubbatan hundi soba tahuu mirkaneeysite. Diinoonnis dubbiin sun akkasiin jalaa fashalte. Namoonnummaan “OMN hijaaba dhoorkite, OMN Muslima hin feetu”jechaa turan,gaafa Aisha Oromia Ali hijaaba isii uffattee hulaa OMN keessaan sagantaa AOA SHOW qabattee as baatu ammas, “OMN miidiyaa shirorkeessaati,muslima malee hin fedhan” jechuun olola biraa jalqaban,sunis hoggasuma jalaa fashalaawe. Ammas tooftaa biraa barbaaduu ittuma fufan……. Sagantaan Afaan Amaaraa yeroo banamus mormii isaanii hin lakkifne, “OMN kan Oromootii Afaan Amaaraa maaliif tamsaasama, isaanuu afaan keenyaan hin tamsaasanii” jechuun olola oofaa turan. Gaafasis osuma isaan qeeqanii OMN irraan tarkaanfatee itti fufe. San booda ammas gaafa Ogadeeniif sagantaan Afaan Somaalee kennamee tamsaasuu jalqaban,ololli isaanii addaan hin cinne. Akkasuma ammas kunoo Afaan Arabaan banamnaan olola isaanii jalqaban. Waan fedhan jedhanis humaan fidanii kunis akkasumatti irra aanama.